MANJAKANDRIANA : Potiky ny afo koa ny Sekoly “Notre Dame de Lourdes”
Ny sabotsy tolakandro 19 septambra lasa teo iny ihany koa dia nahazoana loharanom-baovao ihany koa avy any Manjakandriana fa may levon’ny afo tanteraka ny sekolin-dry Masera “Notre Dame de Lourdes” ao an-toerana. Goavana ny fahasimbana vokatr’izany. 21 septembre 2020
Tsy nisy azo noraisina intsony ny tao anatiny, rava tanteraka ny fananana raha ny fitarainana voaray. Tsy fahatomombanan’ny herinaratra koa no voalaza fa nahatonga ny loza ary ny tena nahasahirana ny tompon’andraikitry ny sekoly sy ny mponina tao an-toerana dia ny fifehezana ny afo noho ny tsy fisiana mpamonjy voina ao Manjakandriana.
Nifanome tanana, niara-nisalahy namono ny afo, araka izany, ny mponina sy tompon’andraiki-panjakana ao an-toerana. Naharitra ora telo teo ho eo ny firehetana.